9 Zvikonzero Nei Kuisa MuRefertral Kushambadzira Software Ndiyo Yakanyanya Investment Kune Yako Bhizinesi Kukura | Martech Zone
9 Zvikonzero Nei Kuisa Mune Referral Kushambadzira Software Ndiyo Yakanyanya Investment Kune Yako Bhizinesi Kukura
Kana zvasvika pakukura kwebhizinesi, kushandiswa kwetekiniki hakudzivisike!
Kubva padiki amai nepop zvitoro kumakambani makuru, hazvirambike kuti kuisa mari mu tech kunobhadhara zvakanyanya uye kuti varidzi vazhinji vebhizinesi havazive huremu hwekudyara mu tech inotakura. Asi kugara pamusoro pekufambira mberi tekinoroji uye software harisi basa riri nyore. Sarudzo dzakawanda, sarudzo zhinji…
Iwe unogona, uye bhizinesi rako haugone kuribhadhara?
Chii chinonzi Referral Marketing Software Investment?
Wese muridzi webhizinesi ane sarudzo yekuti kupi uye sei kuisa mari yavo. Izvi zvinogona kuve chero chinhu kubva mukutenga zvinyorwa uye nekuhaya vashandi, kutenga zvigadzirwa nemidziyo yaunoshandisa kuita bhizinesi rako. Asi sarudzo yekuti kupi uye riini yekuisa mari inogona kunetsa.
Mukati megore, makambani anoita smart kutumira kushambadzira software investments vanogona kuona kukura nekukurumidza uye zvirinani purofiti margins. Kune akawanda anotumira ekushambadzira software zvigadzirwa kunze uko izvo zvinogona kuita kuti hupenyu hwako uye hupenyu hwevashandi vako zvive nyore.
Vanofara vashandi = kuwedzera kukura!
"Kuisa mari" mukutumira software yekushambadzira zvinongoreva kuwana marezinesi kune anotumira ekushambadzira software inodiwa kumabasa ezuva nezuva, kushambadzira kana kumwe kuita kwebhizinesi. Kazhinji, varidzi vebhizimusi vanotanga nekutenga yekuendesa kushambadzira software iyo yavanoda kumhanyisa bhizinesi vachimirira kutenga marezinesi e "yakanaka kuva" software mune inotevera nhanho.
Kuisa Mari muReferral Kushambadzira Software Kunobatsira Sei Bhizinesi Kukura?
Kunyangwe iwe uine yekutanga kana uri CEO weakawanda-makomisheni mashandiro, kwete wese munhu anotenda iyo hype iyo yekudyara mukutumira kwekushambadzira software inokurudzira bhizinesi kukura uye that it’s arguably the safest investment for any business.
Heano zvikonzero zvipfumbamwe maererano naKirsty McAdam; Muvambi uye CEO wekutungamira kushambadzira software mutungamiri, Referral Fekitori ndiani anogovera nei kuisa mari mune yakakwira-kusvika-kudhara kutumira software ndicho chinhu chakanakisa chaungaite kubhizimusi rako rekukura uye nzira yekutengesa.
verenga Martech Zone’s Article About Referral Factory
Chikonzero 1: Gara Mberi kweMutambo wekutumira
Imwe yemabhenefiti akanakisa iwe aungave iwe sekambani kugara pamberi pevanokwikwidza uye nzira iri nyore yekuita izvi ndeyokuva neyemberi uye yakapusa kushandisa kuendesa kushambadzira software kushandisa bhizinesi rako. Izvo zvirinani kutumira kwekushambadzira software iro rako bhizinesi rinoshandisa, zvishoma zviito zvemanyorerwo zviito izvo timu ingangofanira kuita
Kuwana gumbo-kumusoro pamakwikwi zvinoreva kuti bhizinesi rako rinozokwezva vamwe vatengi uye riwedzere mari yako. Ingo funga nezve iyo nguva iyo masocial network akatanga kwavo kushambadzira mapuratifomu. Izvo izvo zvaive zvekutanga kutora (kushandisa smart software kuvhura zviuru zvemashambadziro kune vavanotarisira vateereri) zvakapwanya makwikwi avo.
Chikonzero 2: Yakagadziridzwa Referral Kubudirira
Kuve neyakanakisa yekuendesa kushambadzira software zvakare zvinoreva kuti rako bhizinesi riwedzere kushanda. Kushandisa kutsva kwekushambadzira software kunogona kutanga kunosanganisira zvimwe zvipembenene nemarwadzo ekukura, asi kana ukasvetuka, bhizinesi rako richakura. Pakupedzisira, iwo mubvunzo waunofanirwa kuzvibvunza iwe seamuzvinabhizimusi ndeuyu;
"Munhu anofanirwa kuita izvi here?"
Pakupedzisira, kugadziridzwa kwesoftware kunodonhedza kumusoro uye pasi pabhizimusi rako, zvichiita kuti bhizinesi rako rimhanye uye rikurumidze. Sezvo kutumira kwekushambadzira masisitimu kunowedzera kushanda, kugona kwezvigadzirwa kana masevhisi kukura kunowedzerawo. Mukugadzira bhizinesi riwedzere kushanda, iwe unogadzira mikana yakawanda kuti kambani yako isangane nezvimwe zvinodiwa kubva kune vatengi.
Izvo zvirinani iwe zvaunogona kushandira vako vatengi uye niche; vatengi vanofara vachave uye vanhu vanowedzera kutaura nezvewe. Chekupedzisira, kugadzirisa kukwirisa kwekushambadzira kugona kunodzikisira marara ekukanganisa mukugadzira uye masevhisi, zvichiita kuti rako bhizinesi riunganidze mari yakawanda nekuvandudza kuzadzikiswa
Chikonzero 3: Ipa Iyo Inooneka Platifomu Yekutumira Kushambadzira Kukura
Kuisa mari mukutumira kushambadzira software isarudzo yakasimba yebhizinesi inogona kuwedzera kukura. Paunotanga bhizinesi - mune chero indasitiri - iwe unowanzo kutanga diki. Iyo tariro ndeyekuti iwe uchakura nekusingaperi, zvese muhuwandu hwevatengi uye mari yekambani pachayo. Hakuna mumwe munda unowedzera zvakanyanya senge tekinoroji.
Chikonzero 4: Wana Nguva Yakareba Kubatsirwa Nekanguva Pfupi Kuzvipira
Kuisa mari mukutumira kushambadzira Software Platform - Kutenga mune kuendesa kushambadzira software chirongwa or SaaS means you’re laying a foundation for your business’s success. The money you spend now will grow in value as your business benefits from the investment.
Chikonzero 5: Yakagadziridzwa Kuteerera Kwevatengi
Nekudyara muinotumira kushambadzira software, iwe unogona kuona iko kukuru kuvandudzwa kwevatengi-bhizinesi kutaurirana. Kutenda kune ayo akavakirwa-mukati maitirwo, kuendesa kushambadzira software inowanzo kuvandudza kutaurirana nevatengi zviripo.
Kunyangwe kungave kuburikidza neemail kana zvemagariro midhiya, mari mune yekuendesa kushambadzira software inokupa iwe dzimwe nzira dzekusvika kune vako vaunoda vateereri. Nekudaro, bhizinesi rako rinogona kubudirira kubva mukukudziridza nekukudziridza hukama hwakanaka nevazvino uye vanogona kuve vatengi. Iyo yekuendesa kushambadzira software zvakare inopa mukana wekuvandudza epakati-bhizinesi hukama.
Bhizinesi ndere nezve hukama hunobatsira pamwe nekutsvaga nzira dzekuwedzera nekusiyana. Kana iwe ukashandisa izvo zvinongedzo kune yako mukana, ese makambani aigona kuona yakakura kukura uye hunyanzvi. Nesarudzo imwe yemari, iwe unogona kuvhura mikova yako kune iyo nyowani nyowani seti yekubatanidza iyo yaive patafura pamberi.
Chikonzero 6: Wedzera Zvaunoita
Iyo yakagadziriswa kambani inogadzira nevhoriyamu yakakwira, ine mashoma kukanganisa kwevanhu. Bhizinesi rako rinogona zvakare kushandisa rekutengesera kushambadzira software kuronga mabasa uye kudzikisira nguva inotora kupedzisa zvimwe zvinangwa. Nekodzero yekuendesa kushambadzira software, iwe unogona nyore kuendesa mabasa kuti uve nechokwadi chekuti basa raitwa nekukurumidza uye zvakanyanya basa.
Chikonzero 7: Kuwana kune Nani Chengetedzo
Mabhizinesi mazhinji anotya kubiridzira kana kutyisidzira cyber uye nechikonzero chakanaka. Tekinoroji inoita kuti kutya uku kuve kwechokwadi. Hazvina kana zuva rinopfuura pasina nhau dzeimwe nyowani inoparadza. Zvinoshamisa kuti, software ndiyo yakanakisa (yega?) Kudzivirira.
Chikonzero 8: Yakagadziriswa Kushambadzira
Chii chinopa bhizinesi rako kukura zvakanyanya, uine kana pasina iyo software?
Kutumira kwakanaka kwekushambadzira.
Chinhu chakanakisa nezve tekinoroji ndiyo mukana wainopa kana zvasvika pakutumira kushambadzira. Kubva kushambadziro yemagariro enhau kuenda kushambadziro, kuendesa kushambadzira software masevhisi anokugonesa iwe kuparadzira izwi uye kukurudzira ruzivo nezve rako bhizinesi nekukurumidza
Mazhinji marevhizheni ekushambadzira masevhisi ari kushandiswa nezviuru zvevashandisi kubata uye kudzora maitiro avo ekutengesa. Nekudyara mari muzvirongwa zvekushambadzira senge izvi, unogona kudzikamisa ako ekushambadzira ekushambadzira nepo panguva imwe chete uchiwedzera kuburitswa kwako.
Chikonzero 9: Vhura Misuwo Mitsva
Tekinoroji inovhura mikova iwe yaungangodaro usina kumbofungidzira kuti inogona kuita kune rako bhizinesi. Makambani mukutanga kwavo kusvika pakati pekukura nhanho anonyanya kubatsirwa kubva mukudyara mune nyowani yekutsvaga kushambadzira software zvigadzirwa uye ivo vatsva vanozvigadzira.
Pasina kudyara mukuendesa software yekushambadzira, kambani yako inogona kumira sezvo masisitimu achishaya echinyakare, vatengi vachisiya chigadzirwa chako kana sevhisi, kana nhengo dzechikwata dzichisiya nekuda kwekusarongeka.
Investment iri pamoyo pebhizinesi rega rega. Saiye muridzi webhizinesi kana CEO, iwe sarudza kuti mari yako inoenda kupi. Iyo chete nzira mabhizinesi anokura ndeye kana kudzokororwa iri musimboti musimboti.
Iwe unofanirwa kuita iyi nheyo yekudyidzana inobatsira mukana hwaro mukuita kwako sarudzo; kunyanya kana uchiisa mari mukutumira kushambadzira software. Sezvo iwe paunodzoka kune iyo yekudhirowa bhodhi yekutanga kwegore idzva rebhizinesi, funga kuti ndezvipi zvekutumira zvekushambadzira software mari iwe yaunofanirwa kuita kusimudzira bhizinesi rako kumberi.
Kunyangwe izvo zvichireva diki Software seSevhisi (SaaS) purchase to streamline your systems or to invest in a long-term partnership with a referral marketing software company, it’s undeniable there’s no time like the present to ask the hard questions. Once you’ve pinpointed where your investment should go, it’s time to make it happen.
Kuzivisa: Ichi chinyorwa chinosanganisira zvakabatana zvinongedzo ku Referral Fekitori.
Tags: affiliatekutumira fekitorikutumira kushambadzirakutumira nzira yekutengesakutumira zvikonzerokutumira motokari
Pamakore makumi matatu nematatu ezera hupenyu hwangu hwakatendeuka zvinoshamisa. Ndakawana zvipingamupinyi zvinotyisa murwendo rwangu rwekushambadzira. Ini ndakave nemuyedzo wakasununguka pamaoko enhau uye ndakapihwa isingasviki gumi% mikana yekuenderera parwendo rwangu rwekushambadzira. Mushure mekuyedza kwakawanda uye mazuva zana negumi nemana mugehena; Ini ndakazvidzosera. Kwete chete ini yandakachengeta yangu yakasimba iyo yakasarudzwa se33nd yepamusoro bhizimusi kambani muUSA muna 10 neEmabhizimusi Magazini, ndakatenderera kumashure ndakasimba.
Ungatanga Sei Kudonhedza Bhizinesi
OwnBackup: Njodzi Kudzoreredza, Sandbox Seeding, Uye Dhata Archival yeSalesforce